Zvakaita Indonesia—Chitendero, Nyika, Vanhu
Nyika Indonesia iri pakati peAustralia neAsia uye pasi rose ndiyo nyika ine zvitsuwa zvakawanda, uyewo equator inocheka nepakati payo. Pazvitsuwa zvinopfuura 17 500 zviri ikoko, zvakawanda zvacho zvine makomo uye masango ane miti yakawanda. Kune makomo akamboputika anopfuura 100 uye mamwe acho anogona kuputika zvakare, saka ndiyo nyika inonyanya kuputika makomo kupfuura dzimwe dzose.
Vanhu Indonesia ine vanhu vakawanda zvokuti pasi rose ndiyonyika iri panhamba 4 (China ndiyo iri pokutanga, kwouya India, kwotevera United States) uye inogara vanhu vemarudzi anopfuura 300. Kana tikabatanidza vanhu verudzi rwechiJavanese nechiSundanese, nhamba yavo inopfuura hafu yevagari vemo.
Chitendero Vanhu vokuIndonesia vanenge 90 muzana maMuslim. Vamwe vacho ndevechiHindu, chiBhudha, uye vamwe vanozviti vaKristu. Vanhu vakawanda vanotevedzerawo manamatiro aiitwa nemadzitateguru avo.
Mutauro Munyika yacho munotaurwa mitauro inopfuura 700. Mutauro wechiIndonesian uyo wakabva muchiMalay, ndiwo unoshandiswa nevanhu vendimi dzakasiyana kuti vanzwanane. Vanhu vakawanda vanoshandisa mutauro wemunharaunda dzavanogara.
Zvinovararamisa Vanhu vakawanda vanoita zvokurima uye zvokutengeserana. Nyika yacho ine zvicherwa zvakawanda, miti yemapuranga, crude oil, negas uye ndiyo inonyanya kutengesa rubber nepalm oil.
Zvokudya Mupunga ndiwo unonyanya kudyiwa nevanhu veko. Zvimwewo zvavanodya zvinosanganisira nasi goréng (mupunga wakafurayiwa une mazai nemiriwo), satay (nyama yakagochwa inenge yakabayirirwa patwumiti), uye gado-gado (salad inoiswa dovi).
Mamiriro Ekunze Kunopisa uye kunonaya. Mhepo inosimuka muIndian Ocean inoita kuti pave nemwaka miviri, mwaka wemvura newekusanaya kwemvura. Kunogara kuchiita mabhanan’ana.
VAPARIDZI MUNA 2015
RESHIYO, MUPARIDZI MUMWE PA-
VAKAPINDA CHIRANGARIDZO MUNA 2015
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvakaita Indonesia